RASMI: Kooxda Barcelona oo xaqiijisay xiddiga xiran doona lambarkii 10-aad ee uu ka tagay Lionel Messi… (Ka bogo xiddigaha lambarka 10-aad u soo xirtay Barca) – Gool FM
RASMI: Kooxda Barcelona oo xaqiijisay xiddiga xiran doona lambarkii 10-aad ee uu ka tagay Lionel Messi… (Ka bogo xiddigaha lambarka 10-aad u soo xirtay Barca)
(Barcelona) 01 Sebt 2021. Kaddib bixitaankii Lionel Messi ee Kooxda Barcelona, waxa uu banneeyey maaliyadda lambarka 10-aad ee caanka ah ka hor xilli ciyaareedka 2021/22.
Messi ayaa xirnaa maaliyaddan muddo ka badan toban sano, waxaana laacibkan lagu qasbay inuu ka dhaqaaqo Camp Nou, isagoo ka tagay lambarka 10-aad, waxaana haatan Kooxda Barcelona ay shaacisay xiddiga dhaxli doona lambarkaas caanka ah.
Qofna kuma dhicin inuu taabto lambarkaan intii lagu guda jiray kulammadii dhowaa, laakiin lambarkaan 10-aad ayaa lagu arki doonaa dhabarka dambe ee ciyaaryahan Ansu Fati xilli ciyaareedkan cusub.
Ma jirto ikhtiyaar ah in hawl-gab laga dhigo lambarrada funaanadaha horyaalka La Liga Santander, si ka duwan dhaqan lagu arkay NBA, Serie A iyo xitaa xaaladaha aadka u daran ee horyaalka Premier League, iyadoo Kooxda Chelsea ay hawl-gab ka dhigtay lambarka 25-aad ee uu u xiran jiray Gianfranco Zola.
Kooxda Barcelona ayaa baraheeda xiriirka bulshada ee dhinaca internet-ka soo dhigay Ansu Fati oo sare u haya maaliyadda lambarka 10-aad ee Barca oo uu xiran doono xilli ciyaareedkan.
Inkastoo maaliyadda lambarka 10-aad ay astaan ​​u tahay kubadda cagta guud ahaan, haddana waxa ay Barcelona uga sii culus tahay wax kasta marka loo eego xiddigihii horay u soo xirtay, sida Romario, Ronaldinho, Diego Maradona, Rivaldo iyo Messi.
Haatan masuuliyadda lambarka 10-aad ee Barcelona waxaa qaadan doona Ansu Fati.
Haddaba halkaan hoose ka eeg xiddigihii ugu dambeeyey ee soo xirtay Maaliyadda lambarka 10-aad ee caanka ah ee Barcelona?
Angel Cuellar (1995-1996)
Jari Litmanen (1999-2000)
Lionel Messi (2008-2021)
Saul Niguez oo shaaca ka qaaday sababtii uu uga soo tagay Kooxda Atletico Madrid & Laacibkii udub dhexaadka u ahaa inuu ku soo biiro Chelsea
RASMI: Barcelona oo dooratay xiddiga xiran doona lambarkii 7-aad ee uu ka tagay Antoine Griezmann… (Ka bogo guud ahaan sida loo kala xirtay lambarrada Kooxda)